ယခုအခါ SMEs စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ (Training on Enterprise – TOE) သင်တန်းများအား စတင်ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ UNIDO has launchedaproject in Myanmar called “Fostering Pro-poor and inclusive MSME development in Myanmar” with funding support from Italian Cooperation. The project conceptualization has followedaneeds-based approach conducted in close consultation with government counterparts, partners and stakeholders in Myanmar including the United Nations Country Team (UNCT) and private sector organizations. TOE အစီအစဉ်အား UNIDO နှင့် SMEs ဗဟိုဌာန၊ MYEA, Building Market, Strategy First, Future Myanmar, Opportunity Now စသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားရေးသင်တန်းကျောင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပါဝင်ကူညီသွားမည်ဖြစ်ပြီး (အစီအစဉ်တစ်ခုလျှင် ၄ ရက်နှုန်းဖြင့်) သင်တန်းပေးခြင်း၊ စီးပွားရေးအကြံပေးခြင်း၊ စီးပွားရေးချိတ်ဆက်ပေးမှုများကို အဓိကပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ The current project is aligned with Strategic Priority 2, which aims to “Encourage Pro-poor and inclusive growth (both rural and urban), including agricultural development and enhancement of employment opportunities.” Private sector accounts for the majority (70%) of the country’s gross domestic product (GDP) in Myanmar and since the sector itself is comprised of micro-small and medium sized enterprises, the growth and development of MSMEs will definitely playacritical role in the country’s future economic development. TOE အစီအစဉ်များအား ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မိထ္ထီလာ စတဲ့မြို့များတွင် အဓိကစတင်ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ Training of Trainer (TOT) များ ပို့ချပေးပြီး ရေရှည်စီမံကိန်းဆွဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။